ỊWỤNYE LINUX NA VIRTUALBOX - VIRTUALBOX - 2019
Na Okwu Microsoft, ị nwere ike ịgbakwunye ma gbanwee foto, ihe atụ, ụdị, na ihe ndị ọzọ. Ha nile nwere ike dezie site na iji nnukwu ngwaọrụ nke ngwaọrụ arụ ọrụ, na maka ịrụ ọrụ ziri ezi, usoro ihe a na-enye ike ịgbakwunye okporochị pụrụ iche.
Grid a bụ enyemaka, ọ naghị ebipụta ya, na-enyere aka n'ịmatakwu iji mee ọtụtụ njikwa na ihe ndị agbakwunyere. Ọ bụ banyere otu esi tinye ma hazie okporochị a n'ime Okwu ahụ ma ga-atụle ya n'okpuru ebe a.
Na-agbakwunye ndepụta nke ọkọlọtọ nha
1. Mepee akwụkwọ nke ịchọrọ ịgbakwunye okporo.
2. Pịa taabụ "Lee" na otu "Gosi" lelee igbe "Grid".
3. A ga-atụle ọnụọgụ nke nhazi ọkọlọtọ na ibe.
Rịba ama: Grid agbakwunyere adịghị agbatị n'ofe ala, dịka ederede na ibe. Iji megharịa okporochị ahụ, karịa kpọmkwem, ebe ọ na-adị na peeji nke ahụ, ịkwesịrị ịgbanwuo nha nke ubi.
Ihe omumu: Gbanwee ugbo n'ime Okwu
Gbanwee ogo nke ọkọlọtọ
Ị nwere ike ịgbanwe ọkwa dị iche iche nke grid, karịa kpọmkwem, mkpụrụ ndụ dị na ya, ọ bụrụ na enwere ụfọdụ ihe na ibe, dịka ọmụmaatụ, eserese ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ.
Ihe omumu: Otu esi ejikọta ọnụ ọgụgụ na Okwu
1. Pịa na ihe agbakwunyere ugboro abụọ ka imepee taabụ ahụ. "Hazie".
2. Na otu "Hazie" pịa bọtịnụ ahụ "Kwenye".
3. Na nchịkọta nhọrọ nke bọtịnụ, họrọ ihe ikpeazụ. "Nhọrọ Grid".
4. Mee mgbanwe ndị dị mkpa na igbe ihuenyo ahụ site na ịtọ ntọala ntanetị na iru nha na ngalaba "Ụdị ọhụụ".
5. Pịa "OK" ịnabata mgbanwe ahụ ma mechie igbe.
6. A ga-agbanwe nhazi nhazi nke a.
Ihe omumu: Esi ewepu okwu na Okwu
Nke a niile bụ, ugbu a, ị maara otú e si eme grid na Okwu na otu esi agbanwe agbanwe ya. Ugbu a na-arụ ọrụ na faịlụ dị iche iche, ọnụ ọgụgụ na ihe ndị ọzọ ga-adị mfe karị ma dịkwuo mfe.